Badbaadayaasha Musiibada: Ka digtoonow Khiyaanada iyo Khayaanada (Ogaysiis la sii marayo FEMA) | Nashville VOAD
Sida aan ugu adeegno
Maarso 2021 daadka
Qaraxii Maalinta Kirismaska 2020
Maarso 2020 Tornado
Davidson Co. residents affected by the Dec. 2021 tornadoes
Talk to a representative from Disaster Recovery Connection to connect with resources that may be available to help you recover.
Report Disaster Needs
Badbaadayaasha Musiibada: Ka digtoonow Khiyaanada iyo Khayaanada (Ogaysiis la sii marayo FEMA)
NASHVILLE, Tenn. (Maajo 14, 2021) – Musiibo ka dib, fannaaniinta khiyaanada sameeya, tuugta aqoonsiga iyo dembiilayaasha kale waxay isku dayi karaan inay ka faa’iidaystaan kuwa ka badbaaday musiibada. Saraakiisha maamulka degdega ah ee federaalka iyo Tennessee waxay ku booriyaan deganayaasha inay fiirsadaan oo ay soo sheegaan dhaqdhaqaaq kasta oo laga shakiyo.
Marka ay musiibo dhacdo, dadka damiir laawayaasha ah iyo fannaaniinta khiyaanada ayaa laga yaabaa inay isku dayaan inay ka faa’iidaystaan badbaadayaasha iyagoo iska dhigaya wakiillo FEMA ah ama shaqaale kale oo gargaar musiibo ah. Waxa laga yaabaa inay xitaa isu ekaysiiyaan sidii qaraabo “isku dayayaan inay caawiyaan” badbaadayaashu waxay buuxiyaan codsiyadooda marka ay danaynayaan kaliya inay u isticmaalaan badbaadaha faa’iidooyinkooda. Qandaraaslayaasha qaar baa balan qaadaya in aysan fulin oo ay qabtaan shaqo foolxun ama aan haba yaraatee wax shaqo ah hayn iyagoo jeebka ku shubanaya lacag badbaado ah.
Dadka deggan degmooyinka Davidson, Williamson iyo Wilson waxay xaq u leeyihiin inay kaalmo ka codsadaan FEMA si ay uga caawiyaan kharashkooda waxyeelada iyo khasaaraha ay sababeen duufaannada, duufaannada iyo daadadka dhacay Maarso 25 illaa Abriil 3.
Waxa soo socda waa qaar ka mid ah fal-dembiyeedka caadiga ah ee lagu baraarugo ka dib marka ay musiibo dhacdo.
Dadka sheeganaya inay matalaan FEMA
Waxa laga yaabaa in aad telefoon ama booqasho lama filaan ah gurigaaga ka hesho dadka sheeganaya inay yihiin kormeerayaal guryaynta FEMA ama dadka sheeganaya inay u shaqeeyaan FEMA. Qofka waxaa laga yaabaa inuu ku weydiiyo lambarkaaga Lambarka Bulshada iyo dakhliga ama macluumaadka bangiga. Wakiilada FEMA waxay yeelan doonaan calaamad dahaaran iyo lambarkaaga diiwaangelinta FEMA.
Ilaali sirta ah ee sagaalka lambar ee FEMA kiiskaaga/lambarka diiwaangelinta. Kormeerayaasha guryaha ee FEMA ee sharciga ah MA weydiin doonaan macluumaadkan.
Ha siin macluumaadka bangigaaga qof sheeganaya inuu yahay kormeeraha guryaha ee FEMA. Kormeerayaasha FEMA marna looma oggola inay ururiyaan macluumaadkaaga maaliyadeed ee gaarka ah.
Deeqaha been abuurka ah ee gargaarka maxalliga ah ama federaalka
Ha aaminin qof kasta oo lacag ku weydiista inuu kaa caawiyo helitaanka gargaar. Shaqaalaha federaalka iyo kuwa masiibooyinka maxalliga ah ma waydiistaan lacagna ma qaataan. Wakiilada FEMA iyo Maamulka Ganacsiga Yaryar ee US waligood wax lacag ah kama soo dalacaan codsadayaasha kaalmada musiibada, kormeerka ama caawinta buuxinta codsiyada.
Ha rumaysan qof kasta oo u ballan qaadaya deeqda musiibada ah ee loogu beddelayo deebaaji lacageed oo badan ama lacago kale oo dhammaystiran.
Qandaraaslayaasha dhismaha ee been abuurka ah
Isticmaal qandaraasleyaal maxalli ah oo shatiyeysan ama la xaqiijiyay oo leh tixraacyo lagu kalsoonaan karo.
Si aad u heshid shati haysta, qandaraasleyaal Tennessee shahaado leh, hubi Waaxda Ganacsiga & Maamulka Caymiska Liiska Shatiga (tn.gov) .
Horta ha u bixin wax ka badan kala bar kharashka dayactirka.
Codso in qandaraasleyaashu ay faahfaahin ka bixiyaan shaqada aad ka filayso inay qabtaan oo weydii inay ku siiyaan qiyaas qoraal ah.
Codsiyo samafal oo been abuur ah. Dembiilayaashu waxay ka faa’iidaystaan badbaadayaasha iyaga oo u soo dira isgaarsiin been abuur ah iimaylka ama warbaahinta bulshada iyo iyagoo abuuraya mareegaha beenta ah ee loogu talagalay inay codsadaan wax ku biirinta. Si aad u hesho liiska samo-falka sumcadda leh ee ay ansixisay Isbahaysiga Wax-bixinta ee Wanaagga Ganacsiga ee Xafiiska Wanaagsan, tag Give.org .
Isbahaysigu wuxuu kugula talinayaa “ha ka jawaabin iimaylada aan la rabin, ka fiirso kuwa telemarketers ee riixaya oo iska ilaali samafal been abuur ah oo run u muuqda adigoo isticmaalaya magacyo isku mid ah.” Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ka fogaanshaha khiyaanada bixinta samafalka, booqo bogga internetka ee Guddiga Ganacsiga Federaalka ee www.consumer.ftc.gov/features/scam-alerts .
Ka warbixi Fadeexada. Warbixintu waxay caawisaa ilaalinta dadka kale. Iyadoo wakaaladu aanay mar walba dabagal ku samayn karin tuugta, waxay isticmaali karaan macluumaadka la ururiyo si ay u qoraan qaababka xadgudubka. Nidaamyadaasna waxay horseedi karaan in tallaabo laga qaado shirkad ama warshad.
Iyada oo ku saleysan nooca khiyaanada aad arki karto, la xiriir wakaaladda ku habboon.
Haddii aad aaminsan tahay in adiga ama qof aad jeceshahay aad noqotay dhibane khiyaano ama xatooyo aqoonsiga, isla markaaba u sheeg booliiska deegaankaaga ama waaxda sheriff, ama la xidhiidh xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Tennessee.
Dhaqangelinta Sharciga Deegaanka: Waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad u sheegto khayaanada waaxda booliiska deegaankaaga ama xafiiska sheriff, gaar ahaan haddii aad lumisay lacag ama hanti ama aad rumaysato in qof xaday aqoonsigaga.
Haddii aad ka shakisan tahay khiyaano nooc kasta ah oo la xidhiidha gargaarka musiibada ama aad aqoon u leedahay khiyaanada, qashinka ama xadgudubka, waxaad ku soo wargelin kartaa talooyinkan -24 saacadood maalintii, todobada maalmood ee usbuuca – Khadka Tooska ah ee FEMA Khayaanada Musiibada 866-720-5721. Ama, iimayl u dir [email protected] .
Haddii qof uu u isticmaalayo macluumaadkaaga shakhsiyeed si uu u furto xisaabaad cusub, u gato ama u helo canshuur celin, ku soo warbixi IdentityTheft.gov .
Waxaad ka dacwoon kartaa Waaxda Arrimaha Macmiilka ee Tennessee haddii lagugu khiyaaneeyay ama aad muran ka qabto ganacsi ku saabsan wax kala iibsiga.
U-sheegida Better Business Bureau Scam Tracker waxay ka caawin kartaa dadka kale inay ka warqabaan khiyaamooyinka aaggaaga.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan soo kabashada musiibada Tennessee, booqo www.tn.gov/tema.html iyo www.fema.gov/disaster/4601 . Waxa kale oo aad FEMA kala socon kartaa www.facebook.com/fema iyo Twitter @FEMARegion4 .
Maxaad iska diiwaan gelisaa FEMA haddii aad caymis ku jirto
Haddii aad la kulantay khasaare duufaanno ba’an iyo daadadka ku dhuftay degmooyinka Davidson, Williamson iyo Wilson Maarso 25 – Abriil 3 oo aad sugayso dejintaada
Jawaabaha FEMA: Habka Racfaanka Q&A
Xogta laga helo FEMA.com Maaha wax aan caadi ahayn in badbaadayaashu ay rafcaan ka qaataan go’aamada FEMA ee ku saabsan gargaarka musiibo ka dib. Kuwa
Xarunta Soo kabashada Wakaalado Badan ayaa Furan si ay u Caawiso Dadka ay Saameeyeen Maarj 2021 Cimilo Daran
Meheradaha iyo dadka deggan aagga lagu dhawaaqay hadda waxay codsan karaan deymaha musiibada ee dulsaarka yar iyo kaalmada maaliyadeed ee kale. Xarunta Soo-kabashada Hay’adaha Badan
Kaalmo Sharci oo Bilaash ah oo Loo Heli karo Badbaadayaasha Duufaanta Tennessee Dhexe ee 3 Degmo
Khadka Taleefanka waa la hawlgeliyay: FEMA-4601-DR-TN HELP4TN En Español El blog de HELP4TN existe para ser un recurso a los olugbe de Tennessee que buscan
Maareeyayaasha kiis masiibada maxalliga ah waxay bixiyaan caawimo bilaash ah, mid-ka-mid ah, Luulyo 1deeda Plaza Mariachi
Waqtigu wuu dhamaanayaa! Xilliga kama dambaysta ah ee FEMA waa Luulyo 7, 2021. Haddii gurigaaga ama meheraddaada ay saameeyeen waxyeelada duufaanta iyo daadadkii Maarso 25-Abriil
Explore all our news and updates